Shilapatra: Shilapatra News Portal
Thursday,04 June, 2020 | २२ जेठ २०७७
अपडेटः २२ जेठ २०७७ । ४:४५ स्रोत: worldometers.info/ covid19.mohp.gov.np
लकडाउनमा तरकारी बनाउन सिकेँ ब्लग१२ जेठ २०७७
महाविपदमा काम नलाग्ने सरकार किन चाहियो ? के सरकार यतिविधि कृतघ्न र गैरजिम्मेवार हुन मिल्छ ? के सत्तामा पुगेपछि सबै जनता आफूजस्तै कालिज र बँदेल खान सक्छन् भन्ने सोच छ सरकारको ? भोलि भोट माग्न ती जनतासँग फेस हुने नैतिक बल नेतासँग रहला ? ब्लग३० चैत २०७६
बाबा ! कोरोना कहिले मर्छ ? 'हामी धेरै दिन बाहिर ननिस्केपछि ऊ भोकै हुन्छ र मर्छ अनि करोना सकिन्छ, हामी बाहिर जान पाइन्छ', छोरीको अबोध अनुमान आयो ब्लग२९ चैत २०७६
सङ्कटमा जिम्मेवार सरकारको अपेक्षा यो पटक जनताको विश्वास जित्न नसके अब अर्को पटक जनताको जनमतले अवश्य कारबाही गर्नेछ । र, अहिलेका सत्ताधारी दलका पार्टीनेताहरू पनि भविष्यमा क्षेत्रीय पार्टीतिर टाँसिन जानु नपर्ला भन्न सकिन्न ब्लग२९ चैत २०७६
कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाललाई १० सुझाव पाँच बर्ष भन्दा धेरै बाझो राखेमा उक्त जग्गा त्यस पछिको कम्तिमा पनि १० बर्षसम्म जग्गाधनीले बेचबिखन गर्न, बैकमा धितो राख्न, अंशबण्डा गर्न बन्देज लगाइ उक्त जग्गा स्थानीय कृषकहरुको सहकारी समुहलाई निशुल्क कृषि गर्न उपलब्ध गराउँ ब्लग२९ चैत २०७६
फेरि आयो कालो २८ चैत सम्झनामा मात्र तिनै स्मृति अनि सुन्दर र कर्णप्रिय स्वर/सङ्गीत हाम्रालागि छाडेर जाने प्यारो मित्र, एउटा राम्रो स्रष्टा/कलाकार, एउटा जिम्मेवार र वफादार राष्ट्रसेवक दुर्गाबाबुप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन ब्लग२८ चैत २०७६
कोरोनाले यूएईमा छटपटिएको नेपाली मन यो संकटमा आफ्नै घरमा हुन पाएको भए दुःखमा पनि आनन्दको सास फेर्न पाइन्थ्यो । तर, यहाँ अर्काकाे देशमा बस्दाको पीडा भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ ब्लग२७ चैत २०७६
बैठक कोठाभित्रै सुरुङ खन्ने ‘रत्न’ गुमेको दिन नेपाली बामपन्थी आन्दोलनका योद्धा सहिद रत्नकुमार बान्तवाकाे सामन्ती राज्य व्यवस्थाको अन्त्य र गणतन्त्र नेपाल निर्माणको आन्दोलनमा पार्टी संगठनको सिलसिलामा २७ चैत, २०३५ मा इलाम जिल्लाको इभाङमा तत्कालिन पञ्चायत सत्ताधारीले गोली हानी हत्या गरे ब्लग२७ चैत २०७६
सम्झनामा २६ चैत : अनारसको बिउ जिन्दावाद ! बाले सामान्य चिना हेर्ने गर्नुहुँदोरहेछ । म जन्मिनेवित्तिकै चिना बनाउनुभएछ । खै कुनकुन ४ वटा ग्रह एकै ठाउँमा छन् रे मेरा । जङ्गबहादुर राणा, शेरबहादुर देउवा ककसको पनि यस्तै छ रे ग्रहको अवस्था । यसलाई 'राजयोग' भन्छन् रे ! ब्लग२६ चैत २०७६
जब भान्छाबाट बाको आवाज आयो... ममीको हातमा कफीको गिलास छ । टेबुलमा बसेेर कफी सुरुपसुरुप पार्दै हुनुहुन्छ । बाको हातमा चक्कु र भाँडा छ अनि र्‍याकमा मरमसला खोज्दै हुनुहुन्छ । कुन मसला कहाँ छ ? कुन भांँडामा के पकाउने ? ब्लग२५ चैत २०७६
भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न किन सकिएन सरकार ? यदि सरकार छ भने जनताको रगत, पसिनाको करबाट चलेको सरकारी सेवा, सुविधा त्यागेर जनताको माझमा उभिन सक्नुपर्छ नि यस्तो बिपत्तिको बेलामा । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने किन सकिएन सरकार ? ब्लग२४ चैत २०७६
मन्त्रीको आत्मकथन : देश मात्र चलाउने, परिवार चलाउनुपर्दैन ? राष्ट्रिय ध्वजावाहकले एजेन्टमार्फत् विमान चार्टर पठाओस् अथवा प्रत्यक्ष पठाओस्, चासो किन होला ? २-४ करोड तलमाथि भयो भन्दैमा कत्ति चिन्ता हो क्या ! आखिर यिनका खल्तीबाट भर्खर पैसा झिकिएर आउने त होइन ब्लग . कला / साहित्य३ घण्टा
श्रीमानले पनि गरे हुँदैन घरधन्दा ? महिला पनि अफिस जान्छन् । पुरुष पनि जान्छन् । तर, महिला घरमा आएर बस्न पाउँदैनन् । घरधन्दाले पर्खिरहेको हुन्छ । पुरुषलाई अफिस सकिएपछि हाइसुख । अफिस नजाने महिलाका लागि त घरको बाहेक अरू काम पनि नहोला तर अफिस जाने महिलाले कति काम गर्नुपर्ला ब्लग४ घण्टा
अस्पताल बन्द हुँदा कसरी घटे आर्यघाटमा शव ? पशुपति क्षेत्रका आर्यघाट, भष्मेश्वर घाट र विद्युतीय शवदाहगृहमा गरी दैनिक २५ देखि ३५ शवहरु दहन हुन्छन् । तर अहिले दैनिक औसतमा १० देखि १५ वटा शवदहन गर्न ल्याइन्छन् । बाँकी संख्या खोइ त ? ल दुर्घटनाबाट मृत्यु हुने १ जना घटे । टाढाटाढाबाट ल्याउने पनि ल २ जना नै मानौँ । अरु खोइ त ? ब्लग१० घण्टा
कोरोना, सतर्कता र अफवाह चुक्कुल पनि त्यस्तै हो । सेनिटाइजर लगाएर मात्र काम गर्ने र वाहिरका सामान छुंदा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने मात्र हैन वरु खाना वनाउँदा समेत वाहिरवाट ल्याइएका वस्तु पकाउदा समेत सम्भव भएसम्म सेनिटाइजर लगाउने कार्य उपयुक्त होला ब्लग२० चैत २०७६
सरकार ! रेमिट्यान्स चल्ने तर देशमा आउन नपाउने ? हामीसँग क्वारेन्टाइनका लागि भवन छैनन् भने खाली चौर छन् । वनपाखा छन् । अस्थायी टेन्ट बनाएर पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अनि चेकजाँच गर्दै घर पठाउन सकिन्छ ब्लग१९ चैत २०७६
हेल्लो ! दिदीलाई अस्पतालले भर्ना गरेन है ! 'सुन न, ब्यान मैले भनेको सतार छ नि, हो त्यो दिदी बिरामी भएर अस्पताल लग्या रे, कसैले पनि हेर्न मानेनछन् नि ! बल्ल सरकारी अस्पताल लगेपछि डाक्टरले भर्ना गरेर राख्या'छन् रे !’ ब्लग१८ चैत २०७६
अभाव र अनिकालबाट कोही नमरून् सरकार ! दैनिक श्रम गरेर गुजारा चलाउनेहरूको हविगत निकै कष्टकर देखिन्छ । दिनभर काम गरेर बिहान-बेलुकाको छाक टार्ने यस्तो श्रमिक वर्ग लकडाउनको नराम्रो मारमा परेको छ । यसबारे सरकार नै बढी जिम्मेवार र अग्रसर हुन जरुरी छ ब्लग१७ चैत २०७६
भुल्केमा कोरोना संक्रमणको अन्त्य : मन्त्री घिमिरे
प्रदेश २ मा संक्रमितको संख्या ९६१ पुग्यो, २४ घण्टामा थप १०२ जनामा संक्रमण
भारतबाट आउने बढेपछि २४ घण्टाभित्र क्वारेन्टाइनमा बस्नेको संख्या दोब्बर
कोरोना रोकथाममा गण्डकी प्रदेशको अग्रणी भूमिका : मुख्यमन्त्री गुरुङ
बासी मासु बेच्ने २ पसललाई जरिमाना
कर्णालीमा १ सय १४ कोरोना संक्रमित थपिए, संक्रमितको संख्या ३८९ पुग्यो
सुदूरपश्चिममा थप ५ जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमितको संख्या ८६